နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၃ | NAB သတင်းများ | 2016 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » 2016 » နိုဝင်ဘာလ
လစဉ်မော်ကွန်း: နိုဝင်ဘာလ 2016
သတင်းအချက်အလက်စနစ်များလုံခြုံရေးအင်ဂျင်နီယာချုပ် (ISSE) အဆင့် III ကို
ရာထူး: သတင်းအချက်အလက်စနစ်များလုံခြုံရေးအင်ဂျင်နီယာချုပ် (ISSE) အဆင့် III ကိုကုမ္ပဏီ: Leidos တည်နေရာ: ကိုလံဘီယာ MD အမေရိကန်ဖော်ပြချက်: Leidos မှာ Leidos အကြောင်း, ငါတို့ငါတို့န်ထမ်း၏အသက်အရည်အသွေး, ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အလုပ်တိုးတက်အောင်များအတွက်တာဝန်ယူ ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကျနော်တို့မစ်ရှင်-ဝေဖန်ပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်စေသည့်ပံ့ပိုးမှုများထက်ကျော်လွန်ချဲ့ထွင်; ကတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုကိုလူများပါဝင်ပတ်သက်။ ...
Leidos ချုပ်စာချုပ်အပေါ် component အဆင့်ဆော့ဝဲစမ်းသပ်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်!
ရာထူး: Leidos ချုပ်စာချုပ်အပေါ်စိတျအပိုငျးအဆင့်ဆော့ဝဲစမ်းသပ်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာချုပ်! ကုမ္ပဏီ: Leidos တည်နေရာ: Annapolis တွင်လမ်းဆုံ MD အမေရိကန်ဖော်ပြချက်: Leidos မှာ Leidos အကြောင်း, ငါတို့ငါတို့န်ထမ်း၏အသက်အရည်အသွေး, ၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်ငါတို့သည်လည်းအသက်ရှင်သောလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်အလုပ်တိုးတက်အောင်များအတွက်တာဝန်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကတိကဝတ်ကျနော်တို့မစ်ရှင်-ဝေဖန်ပြဿနာများဖြေရှင်းနိုင်စေသည့်ပံ့ပိုးမှုများထက်ကျော်လွန်ချဲ့ထွင်; ကတိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှု ...
လက်ထောက်ပါမောက္ခများ: Music ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အသံကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်
ရာထူး: လက်ထောက်ပါမောက္ခများ: Music ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အသံမှတ်တမ်းတင်ကုမ္ပဏီ: ဖလော်ရီဒါအတ္တလန္တိတ်တက္ကသိုလ်တည်နေရာ: ဖလော်ရီဒါအတ္တလန္တိတ်တက္ကသိုလ်တွင်ဂီတ၏ Boca Raton FL အမေရိကန်ဦးစီးဌာနဂီတထုတ်လုပ်ရေးနှင့်အသံကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက်လက်ထောက်ပါမောက္ခအဆင့်မှာတစ်ဦးသက်တမ်း-လမ်းကြောင်းအနေအထားများအတွက် applications များဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်။ အဆိုပါချိန်းသြဂုတ်လ 2017 စတင်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလက်ထောက်ပါမောက္ခအတွက်ဘွဲ့ကြိုနှင့်ဘွဲ့လွန်သင်တန်းများသင်ပေးပါလိမ့်မယ် ...
mid-အဆင့် Oracle က DBA - အင်ဂျင်နီယာချုပ် (TS / SCI - RESTON, VA သို့)
ရာထူး: အလယ်အလတ်အဆင့် Oracle က DBA - အင်ဂျင်နီယာချုပ် (TS / SCI - RESTON, VA သို့) ကုမ္ပဏီ: CACI တည်နေရာ: Reston VA သို့အမေရိကန်ယောဘသည်ဖော်ပြချက်: CACI (ထိုပေါင်းစည်းအသံလွှင့်န်ဆောင်မှုရဲ့ Network န်ဆောင်မှုများ (IBS-NS) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တာဝန်ရှိသည် IBS) အစီအစဉ်။ IBS-NS အားလုံးန်ဆောင်မှုကိုဖြတ်ပြီးစစ်ရေးအသုံးပြုသူများကိုမှန်ကန်အချိန်ထောက်လှမ်းရေး data တွေကိုအနီးပေးမယ့် $ 100M လိမ် software development အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ IBS-NS, တစ်ဦး certified ရရှိထားပြီး ...
နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်အဆင့်လုပ်ငန်းဗိသုကာ / ခဲစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: အလယ်အလတ်အဆင့်လုပ်ငန်းဗိသုကာ / ခဲစနစ်များအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: Leidos တည်နေရာ: ဝါရှင်တန်ဒီစီအမေရိကန်ဖော်ပြချက်: Leidos လက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ပြန်ရေးရာဦးစီးဌာန (VA သို့) ဖောက်သည်များအတွက် program တစ်ခုကိုထောကျပံ့ဖို့အလယ်အလတ်အဆင့်လုပ်ငန်းဗိသုကာရှာကြံနေပါတယ်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းဗိသုကာဒီဇိုင်း, ဖွံ့ဖြိုးရေး, အကောင်အထည်ဖော်မှုကို၎င်း, VA သို့လုပ်ငန်းအသုံးပြုမှုထောက်ပံ့သည့်လုပ်ငန်းဗိသုကာအသင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ် ...
မာလ်တီမီဒီယာစစ်ဆင်ရေးအဆင့်2ပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာချုပ်
ရာထူး: မာလ်တီမီဒီယာစစ်ဆင်ရေးအဆင့်2ပံ့ပိုးမှုအင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ: တွင် JPMorgan Chase တည်နေရာ: ဂျာစီစီးတီး NJ အမေရိကန် - 160027267 ယောဘကိုဖျေါပွခကျြတွင် JPMorgan Chase & Co. , (NYSE: JPM) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း $ 2.6 ထရီလီယံပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီတခုဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်လုပ်ငန်း, စားသုံးသူများနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ, စီးပွားဖြစ်ဘဏ်လုပ်ငန်း, ဘဏ္ဍာရေးငွေပေးငွေယူအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ...
ထုတ်လွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာချုပ် - နယူးယောက်
ရာထူး: အသံလွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာချုပ် - နယူးယောက်ကုမ္ပဏီ: ဗိုလ်မှူးလိဂ်ဘေ့စဘောအဆင့်မြင့်မီဒီယာတည်နေရာ: New York ကနယူးယော့အမေရိကန်အဆိုပါအသံလွှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာချုပ်အဆိုပါစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, ဝယ်ယူရေး, တပ်ဆင်ခြင်း, စမ်းသပ်ခြင်း, အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်စနစ်များကိုထုတ်လွှင့်အသစ်နှင့်တည်ဆဲမာလ်တီမီဒီယာများအတွက်ဘဝ-သံသရာထောက်ခံမှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်နေသည် ။ လွှမ်းခြုံအဖြစ်ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ New York မှာမာလ်တီမီဒီယာ datacenter တည်ရှိသောအခြားပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ datacenters, ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ် ...
Dante BBC World Service များအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲလွှမ်းခြုံ Streamlines
ထုတ်လွှင့်ဦးစီးDanteပေါင်းစည်းမှုကိုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း 250 သန်းနားထောင်မှတိုက်ရိုက်ရေဒီယိုပရိုဂရမ်ဖြန့်ဝေဖို့ networking Portland, OR, နိုဝင်ဘာလ 30, 2016 ကုန်ကျကိုအသုံးပြုသည် - ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထုတ်လွှင့်သည့်အတိုင်းဘီဘီစီ World Service 30 ဘာသာစကားများထက် သာ. ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားန်ဆောင်မှုများထုတ်လွှင့်။ နိုဝင်ဘာလ 8 အပေါ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတရွေးကောက်ပွဲတွင်အဘို့, BBC World Service ယာယီထူထောင် ...
1 ၏စာမျက်နှာ 4312345 » 102030...နောက်ဆုံး»